AirPods ako akadamburwa here paunenge uchifona? Apple iri kutoshanda pane mhinduro | Ndinobva mac
AirPods ako akadamburwa here paunenge uchifona? Apple iri kutoshanda pane mhinduro
Zviripachena kuti isu hatisi kutarisana nenyaya yakajairika uko vese vashandisi veAirPods vane dambudziko iri kana vangave naro, asi panguva iyo iyo kambani pachayo iri kutoshanda pane inogona kugadzirisa dambudziko, imhaka yekuti iripo. Zvinoita sekunge kumwe kunyunyuta kukuru kwevaridzi vane rombo rakanaka veaya maApple Bluetooth mahedhifoni, asi kwete ese sekutaura kwedu, idambudziko inobata vashandisi ve iPhone 6s uye 6s Plus, nekuti avo vane mhando nyowani dze iPhone havana dambudziko.
Apple ingadai yatove kushanda pane inogoneka mhinduro padanho rekudambura isu tichifona uye izvi zvaizosvika mune inotevera inowanika iOS vhezheni. Parizvino vhiki rapfuura takapererwa neshanduro dzebeta dzeanosiyana masisitimu anoshanda eiyo firm, asi vhiki ino tine chokwadi chekuti vanozovhura zvekare mabetas e macOS, iOS, tvOS uye watchOS.
MacRumors inoyambira kuti dambudziko iri rinenge ratova pane yakasarudzika runyorwa rweiyo inotevera vhezheni uye nekudaro tiri kusangana nedambudziko rakasimbiswa kunyangwe pasina zvirevo zvepamutemo nezvazvo Kuti kana, mu Apple inotsigira webhusaiti Kune dzimwe nzira dzekuyedza kuti izvi hazviitike, asi kana iwe uri mumwe weavo vakanganiswa tine chokwadi chekuti zviri nani kuva nemoyo murefu kubvira fix ichaburitswa munguva pfupi yapfuura kuburikidza neyekuvandudza.
Kukundikana chete inokanganisa kana uchifona uye izvi zvinogona kutemwa zvisingatarisirwi, asi kubva kune vashandisi vane iPhone 6s uye 6s Plus. Ndinovimba hapana chimwe chinopfuura icho uye iyo gadziriso inogadzirisa dambudziko ichaburitswa munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » AirPods ako akadamburwa here paunenge uchifona? Apple iri kutoshanda pane mhinduro
Nzira yekudzivirira Safari kubva kutibvunza kana tichida kugamuchira zviziviso kubva pamapeji ewebhu